Madaxweyne Farmaajo oo Kambaala uga qeybgalaya shir ay yeelanyaan dalal Afrikaan ah - Halbeeg News
Madaxweyne Farmaajo oo Kambaala uga qeybgalaya shir ay yeelanyaan dalal Afrikaan ah
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamaed Cabdullaahi Farmaajo xuquuqda sawirka: online
KAMBAALA(HALBEEG)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magalaada Kambaala ee dalka Yugaandha, ayaa maanta ka qeybgalaya shir ay yeelanayaan qaar ka tirsan madaxda qaaradda Afrika.
Shirkaan oo ay ka qaybgalayaan madax ka kala socota Soomaaliya Itoobiya, Yugaandha, Kenya, Tanzaaniya, Koonfur Afrika, Masar iyo Marooko oo ay wehliyaaan ergay ka kala socda hay’ado samafal, kuwo dhaqaale iyo ganacsato ayaa looga hadlayaa koboca dhaqaalaha, iskaashiga dalalka qaaradda, nabadda iyo sare u qaadidda is dhexgalka bulshooyinka Afrikaanka ah.
Waxaa sidoo kale shirka ka qeybqaadanaya masuuliyiin ka socota hay’adda Qaramada Midoobay iyo bankiga adduunka iyo ergo matalaysa hay’ahadaha maaliyadeed ee Afrika kuwaasoo ka wada hadli doona isu dheelli tirka dhaqaalaha iyo sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada Afrika.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale kulan gaar ah la yeelanaya madaxweynaha Yugaandha oo ay ka wadahadli doonaan xiriirka labada dal iyadoo la ogyahay in Yugaandha ay tahay dalka ay ciidamada ugu badan ee AMISOM ka joogaan Soomaaliya.
Inta uu shirkaasi socdo sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo doceedyo la yeelan doona madaxda kasoo qeyb galaysa shirka oo uu kala hadli doono danaha ay Soomaaliya la wadaagto dalalkaas.
Degmada Marka oo guddoomiye cusub loo mgacaabay
Jabbaan oo QM ugu deeqday hal milyan oo doollar oo ay wax uga qabtaan miinooyinka ku aasan Soomaaliya